Dirqalawwanii itti aanan, yeroo ati Hiika Fayyadamaa , akka akaakuu kasaatti filattu jiratu.
Kasaawwanii hiika fayyadamaa sanduqa Akaakuu keessaa jirachuu kan danda'aan, yammuu galfata kasaa galmee kee keessatti saagduudha.
Kasaa keessatti gabateewwan dabaalla.
Kasaa keessatti saxaatoo dabaalla.
Kasaa keessatti wantoota OLE dabaalla.
Madda boqonnaa irraa sadarkaa fayyadami
Galafata kasaa qindeessuu